I-Cappuccino namanga okupakisha | Martech Zone
Ngesonto eledlule ngimise i-burrito yakwaMcSkillet ngisendleleni eya emsebenzini. Ngingahle ngibhale iposi nje ngokuthi ngithanda kangakanani lawo ma-burritos asekuseni naseQdoba, kepha ngizokuyeka. Ngenkathi ngikhona McDonalds, ilukuluku lami langinqoba futhi ngayalela iMcCafe Mocha kunokuma kwami isitolo sekhofi esiyintandokazi.
Izimpawu ezimibalabala, eziyinkimbinkimbi nokupakisha ngamathoni womhlaba kukuzungezile futhi kukwenza uzizwe sengathi unyukela kwikhefi laseYurophu. Awukho, noma kunjalo. Ngibuke ngokucophelela ngenkathi umuntu ongemuva kwekhawunta ecindezela izinkinobho ezingakwesokudla, enyakazisa okungaphakathi, futhi ngivale isiphuzo ngokhilimu ophehliwe kanye nocwecwe lukashokholethi.
Ngafika emotweni, ngathatha isiphuzo sami sokuqala, futhi… ngavuka. Angiqiniseki ukuthi kwenzekeni, ngikholwa ukuthi kube khona ukungasebenzi kahle ngomshini noma okuthile, kepha kunambitheke njengezibhamu ezimbi ze-expresso ezimbozwe ukhilimu ophehliwe. Ngingacishe ngikhiphe isisu noma yiliphi ikhofi (ngangiseMbuthweni Wezempi ngobuhle), kepha bekufanele ngililahle ngaphandle. Vele, iqembu labo belingeke lazi ukuthi ngabe kukhona yini inkinga - noma yini engaphansi kwalapho bebengazi khona inyama yenkomo enhle. 😉
Sine Starbucks phansi phansi emsebenzini wami, ngakho-ke kunzima ukuthi i-hound hound idlule. Ngisithanda kakhulu isiraphu yabo yepepermint… njengoba okhokho bethu bathola ukuthi iCoca-Cola yayinecocaine, ngesaba ukuthi ngelinye ilanga sizothola ukuthi iStarbucks Peppermint inokuthile okungekho emthethweni kuyo.
I-Starbucks inophawu olucace bha, oluhlanzekile olwalutshela abantu abakuzungezile ukuthi, “Nginemali eningi engingachitha ama- $ 4 kubhontshisi oshile.”(Abanye abangane bami bakubiza kanjalo Ama-Fourbucks). Maye, isithonjana samasiko esasiyi-Starbucks sesiqale ukufiphala. Angivamile ukushaya olayini abade futhi ngikwazi ukudlula i-Starbucks kalula njengeGesi Station enestendi sekhofi. Indebe isenhle futhi iyahlukeka, noma kunjalo.
Ngakwesobunxele, mhlawumbe, ikhofi engilithandayo kunabo bonke. Abangane bami abahle uJason noChris banesitolo esikhulu sekhofi, Indebe kabhontshisi ekhoneni ukusuka ekhaya lami.
Ikhofi lingeniswa lisuselwa kukhofi eHamilton, e-Ontario. Zonke iziphuzo, noma ngabe zingenashukela, zisabushelelezi kakhulu, zicebile futhi ziluhlaza. Kunzima ukuchaza umehluko wokuthi ubhontshisi othosiwe kahle, owenziwe phansi, othambile futhi oshisayo ungakhiqiza into enjalo engamanzi futhi emnandi enamagwebu. I-baristas e Isitolo sekhofi esihle kunazo zonke e-Indianapolis linganisa ngokucophelela nesikhathi lapho kudutshulwa khona ukuze kuqinisekiswe ukuthi ukunambitheka kwayo kukhulisiwe. Imvamisa, ngiyababona belahla futhi baphinde balungise ubhontshisi baze bathole isibhamu esifanele - kwesinye isikhathi umswakama ungadlala kabi.
Azibizi kakhulu njenge-Starbucks futhi zingcono kakhulu (ngokucacile zingcono kuneMcCoffee), kepha indebe icacile futhi imhlophe. Akukho okukhethekile… ngaphandle kokungaphakathi. Yilokho engize ukuzothenga, akunjalo? Mina do khokhela ulwazi olunikezwa isitolo, futhi! Igumbi eliningi, amahhala angenantambo, nezinye izihlalo ezikahle.
O, amanga okupakisha! Angikwazi ukucabanga ukuthi iMcDonalds isetshenzise malini ukuzama ukwenza okungaphakathi kwenkomishi kubonakale kangcono ngaphandle kwenkomishi.
Tags: uJason uyawai-spf yesizinda esiningiamarekhodi amaningi we-spfejensi ye-ppci-retargetingukubukwa kwe-spfirekhodi le-spfukubukwa kwerekhodi kwe-spfIzinhlelo ze-TV
Abathengi Bebhizinisi Bahlukile!
Nami ngikwazi ukubhekana nekhofi elibi, kepha ngizizwa njengoMotrin Mom. Ngizihlalela eStarbucks ngoba ukuphela kwendawo engingaya kuyo ngekhefu emsebenzini elifudumele futhi elinezihlalo ezintofontofo ebusika. Imigqa iyancela, ikhofi alilihle futhi nomoya uya ngokuya uba nzima izingane zigijima zizungeze okwezilwane ezifuywayo ezincane.
Izitolo ezinhle nezizimele zekhofi azivamile kulezi zingxenye. Kepha, nginabambalwa futhi ngibahlonipha kakhulu. Phila inkomishi engamakiwe!
Ngabe uke wahlola Izitolo zekhofi ze-Indie? Mhlawumbe kukhona okusondele kakhulu kunalokho okucabangayo!
Jan 13, 2009 ku-8: 51 AM
I-FYI: E-Starbucks ku-Broad Ripple, ikhofi enkulu (i-venti) iyisibibithwane esingaphezu kuka- $ 2.00. Imenyu ye-Bean Cup eku-inthanethi ithi okufanayo yi- $ 1.55. Ngicabanga ukuthi izinganekwane zenkomishi engu- $ 4 zivela ezimakethe ezifana ne-NYC.
Kepha, okuthunyelwe okuhle uDoug!
Jan 13, 2009 ku-11: 03 AM
Nami, ngazama amakhofi akwaMcBlech. Awuzange uhlangabezane nokungasebenzi kahle. Ngiyakwazi lokho ngoba ngibanikeze amathuba amathathu. I-latte eyodwa ebandayo ene-caramel. I-latte eyodwa eshisayo. I-mocha eyodwa eshisayo. Kwangimangaza ukuthi babebabi kangakanani ngempela. Uma ngithola ikhofi elibi kangaka esitolo sekhofi, bengizolibuyisela ngibatshele ukuthi bazame futhi.
Ngingamangala kakhulu uma noma ubani ejwayele ukucwilisa ikhofi esitolo esitolo engashintsha. Isixazululo sami: Ngithenge ikhwalithi ehloniphekile, kepha kusengabizi umshini we-espresso. Into kungenzeka ukuthi yazikhokhela ngenyanga noma ezimbili. Manje sengizenzela eyami ngqo indlela engizifuna ngayo ngengxenyana yezindleko. Uyazi bathini ngengulube egqoke.
UYael K. Miller
Ngikuthole ngenxa ye- swoodruff's Five in the Morning.
Angiyena umuntu ophuza ikhofi kodwa ngiphuza itiye futhi kunezindawo ezithile ezine- “tea” egameni lazo kodwa enuka itiye.
Ngifisa ukwazi, awuzwa ukuthi kuyiphutha lokumaketha ukungabi nophawu enkomishini yakho yekhofi?
Ake sithi umuntu u-X uswele kakhulu ikhofi, badlula umuntu Y ephethe inkomishi yekhofi. Umuntu X ubuza ukuthi uMuntu Y ulithathephi ikhofi. Mhlawumbe uMuntu X akalungile ekunikezeni izinkomba, mhlawumbe uMuntu Y akanamqondo wokuqondisa, mhlawumbe uMuntu Y akasikhulumi kahle isiNgisi, ngakho-ke uMuntu Y unenkinga yokuthola isitolo sekhofi. Ukube inkomishi yekhofi engenalutho empeleni ibinophawu lomuntu ongu-Y ngabe beyazi ukuthi yini okufanele ibhekwe.
Ake sihambise isibonelo ewayinini. Ngiyawakhumbula amagama amanye amawayini kepha hhayi wonke. Lapho ngiyothenga iwayini, ngiba nombono wamalebula ajwayelekile.
Ngikholwa ukuthi ama-logo abalulekile futhi kuyiphutha ukungafaki umkhiqizo wakho ngophawu lwakho.
Ukuba ngabangani beThe Bean Cup, nginesiqiniseko sokuthi abanalo uphawu ngenxa yezindleko zezinkomishi. Bangancamela ukusebenzisa imali kubhontshisi omkhulu futhi ngiyabonga ngalokho!
Ngibonga uSteve ngokushiwo futhi ngithemba ukuthi uzobuya maduzane!
Jan 14, 2009 ku-12: 00 AM
Iphi le Ndebe Yabhontshisi okhuluma ngayo? 😉
Okuthunyelwe okuthakazelisa kakhulu. Futhi ukuba ngumlandeli wesitolo sakho sekhofi esiyintandokazi kukwenza kuthakazelise nangaphezulu. Ngiyavuma, ngicabanga ukuthi ilogo izosiza iNdebe yeBhontshisi, kepha ngicabanga nokuthi mhlawumbe ayizifanele izindleko zokwenza lokho. Esibonelweni esingenhla, ngicabanga ukuthi uMuntu Y uzovele azise futhi ngokushesha uMuntu X ukuthi bayithathephi inkomishi enkulu yekhofi nokuthi ungafika kanjani lapho. Ngikusho lokho ngoba into eyodwa engiyaziyo ukuthi ngikwenze lokho kaningi.